प्रदेशी बाबुले छोरालाई लेखेको मार्मिक पत्र » Khulla Sanchar
प्रदेशी बाबुले छोरालाई लेखेको मार्मिक पत्र
देशि बाबा ले छोरा लाई लेखेको चिठ्ठीले सबैलाई रूहायो : मन थामेर पढ्नुहोला ! प्रदेश बाट नेपाल मा रहेको छोरा लाई बाबु ले लेखेको पत्र ले सबैको मन रुन सक्छ ! विदेश मा गैसकेपछि कति गारो हुन्छ अर्काको देश खाडी मुलुक भन्न जति सजिलो छ विदेश विदेश मा जीवन बिताउन लाखौ गुणा गारो छ ! अर्काको देश मा गएर पसिना बगाउनु पर्छ हामि नेपालि हरुलाइ साएद हाम्रो देश नेपाल पनि बिकसित हुन्थ्यो नेपाल मै काम गर्ने अवसर हरु सिर्जना हुन्थे भने विदेश जानु पर्दैनथ्यो होला बाबा भएर जीवन बिताउन कति गारो छ ! त्यो त बाबु लाई नै थाहा हुन्छ प्रदेशमा रहेको बाबुले नेपालमा रहेको छोरालाई लेखेको एउटा पत्र ।
-बाबुले लेखेको पत्र..
परदेशी बाबाको न्यानो माया अनि पलपलको मिठो सम्झना, तिमीलाई। हुन त प्रविधिले दिनहुँ जसो स्क्रिनमा आमनेसामने गराई दिएकै छ। तर पनि कुरैकुरामा मेसो नपरेका केही मनका कुरा र केही भोगाइबाट सिकेका जीवन सिपका कुरा आज यो पत्र मार्फत तिमीसम्म पुगोस भन्ने सोँचले लेख्ने जाँगर बढेको छ। तिमी हुर्किरहेको समाजको प्रकृति र प्रवृत्तिसँग म र मेरो बुबाको जीवनशैली तुलना गर्दै अगाडीको गोरेटो ठम्याई दिँदो हुँ त तिमी प्रष्ट हुनसक्थ्यौ र म सन्तुष्ट। अफसोस त्यो सुनौलो समय हामीले गुमाएका छौँ। मलाई थाहा छ, तिमी प्रश्न गर्नेछौ, किन रु बाध्यता वा अवसर, लाचारी या महत्वाकांक्षी उत्तर छान्न तिमी स्वतन्त्र छौ। किनकी दोषी म र मैले बाँचेको परिवेश थियो।